दानको औषधीले थेगिँदैछ प्रसूति गृह |
दानको औषधीले थेगिँदैछ प्रसूति गृह
प्रकाशित मिति :2015-11-23 15:59:17
काठमाडौं, मंसिर ७ । भूकम्पका बेला दानमा आएको औषधीले थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृहले काम चलाइरहेको छ । नाकाबन्दीका कारण भएको औषधी अभावलाई टार्न भूकम्पमा दाताहरूले दिएको औषधी प्रयोग गरिरहेको अस्पतालका निर्देशक प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
‘सामान्यतया दानमा आएको औषधी गुणस्तरको नहने हुनाले प्रयोग गरिँदैन तर, हामीलाई आएको औषधी गुणस्तर को छ त्यसैले त्यही औषधी चलाइरहेको छौं’ गौतमले भन्नुभयो ।
शल्यक्रियाका लागि प्रयोग हुने धागो र पञ्जा भने स्टकमा रहेको प्रयोग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सवैभन्दा समस्या रगत चढाउने झोलाको समस्या हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरेको छौं तर, औषधी र झोलाका आपुर्तिकर्ताले अव व्यवस्थान गर्न नसक्ने भनेका छन्’ गौतम भन्नुहुन्छ ।
यस्तै अवस्था रहने हो भने अब ८/ १० दिनपछि औषधीलगायत सवै कुराको अभाव हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । औषधीलगायत अन्य अतिआवश्यक सामग्रीको अभावका बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको गौतमले बताउँनुभयो । ‘औषधी आपुर्तिकर्तासहित मन्त्री र औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भेटिरहेको छौं ।
उहाँहरूले हवाइजहाजबाट औषधी ल्याउने योजना बनाइरहनुभएको छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ । विभागले औषधी आयात गर्न समन्वय गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यसैगरि गैरअावाशिय नेपालीहरूले पनि नेपालमा अाैषधी ल्याउने पहल गरिरहेका छन् ।
‘औषधीको अभाव कुनै हालतमा हुन दिनुहुँदैन, आफैँ गएर भनेपनि जहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट ल्याउनुपर्छ’ गौतम भन्नुहुन्छ । जम्मा ४१५ वेड रहेको परोपकार प्रसूति गृहमा दैनिक ४० जना सुत्केरी हुन आउने गरेका छन् । ४० मध्ये १० वटा जतिको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ ।